[Tribune] Ivorian entrepreneurs, tevera muenzaniso wevanhu veLebanese! - YoungAfrica.com - TELES RELAY
HOME » upfumi [Tribune] Ivorian entrepreneurs, tevera muenzaniso wevanhu veLebanese! - YoungAfrica.com
Nharaunda yeRebhanese ndeimwe yevanhu vane simba uye inotakura makambani makuru eIvory muzvikamu zvakawanda zvinokosha. Haisi nguva yekubvisa unyanzvi hwake nekudzidza kubudirira mune bhizinesi?
VaIoriya varipo muAlumni clubs zvikoro zvebhizimisi zvepasi rose: Harvard, Wharton, HEC, Essec, Insead ... Makunivesiti aya akakurumbira ari kuumba vanhu vanogona kuziva zvirongwa zvakanaka, vanozviziva uye vanovimbisa kuchengetedza kwavo.
Saka sei, takanyanyogadzirisa ruzivo urwu, nyika yedu iri kutambura kuti ione kubuda kwechokwadi chizvarwa chemabhizimisi, chinhu chinokosha mukusimudzirwa kwemarudzi ose? Côte d'Ivoire ine huwandu hwekuwedzera kwe8% pagore, inotungamirirwa nekutengeswa kwevanhu vose uye kushandiswa kwesimba rinowedzera pakati pekutenga simba. Sei tisingazokwanise kushandisa zvakanaka iyi mamiriro ezvinhu akanaka, apo dzimwe nzvimbo dziri kuCôte d'Ivoire dziri kuita zvakanaka zvakadaro?
Bvisa kusarura kwedu
Kazhinji kuisa pikorodho yemhosva yake yekutengeserana kwebhizimisi, sangano reLebanese nderimwe ramakosha zvikuru uye inotakura makambani makuru eIvorian mune zvakawanda zvikamu zvakakosha. Haisi nguva yekubvisa unyanzvi hwake nekudzidza kubudirira mune bhizinesi?
Ndine chivimbo chakasimba chokuti tichakunda. Uye nokuda kweizvozvo, tinofanira kuzvibvisa kunze kwekunetseka kwekusarura kwedu. Panzvimbo pokunyunyuta nezvekwakabva kweizvi kana kuti iyo, inenge iri nani kuziva kuti kubudirira kwechokwadi kweiyo munzanga.
VaLebanese vakanzwisisa kuti itsva yevakati veIvory yakatsvaka nzira yehupenyu yakarongedzwa nemitemo yenyika dzakabudirira
Takazviziva isu kuti kubudirira kwavo kunowanikwa mune chimwe chikamu kubva pamusana wekugona kukwanisa kudzivisa kukanganiswa kwekutonga uko mabhizinesi edu ari pasi apa. Ndinodzokorora pfungwa iyi yezvinhu nokuti, sezvandinofunga kare, handiyeuki Hojeij, Sayegh, Aboudé kana Sayek ... uyo akanga ari kana aiva chero humwe hutungamiri hweIvory.
>>> VERENGA - Lebanese kubva kuAfrica: kutsvakurudza kwevanhu vakangwara asi ane simba
Zivai zvigetsi zvekubudirira
Kubudirira kwavo kunowanzotarisirwa kune hukama hwakasimba hunogona kubvumira chero ani zvake weRebhanese anoda kutanga bhizinesi kuti abatsire kubva kutanga-up, mari isina kufarira kutanga-up. Muchiitiko ichi, nei sangano redu reAfrica musina kubvumira kuti tiite zvakafanana? Sezvo isu tiri vazhinji, hukama huno hunofanira kunge hunotipikisa. Vatsoropodzi varikupedzisira vachitaura pamusoro pekusava nekutarisira kwekusarura kwavanenge vachishandisa kuvashandi vavo. Asi, zvinonzwisisika, kuwanikwa kwevashandi mumakambani eLebanese kunonyanya kudarika kune mamwe makambani ane mugove wekugoverana.
Zviri pachena kuti musha uno une unhu hwakanaka hwemabhizimisi hunotsanangura kubudirira kwahwo munyika yose. Saka zvakakosha kuzivisa izvi kubudirira zvikonzero uye kuzviisa pasi. VaLebanese vakanzwisisa kuti itsva yevakati veIvory yakatsvaka nzira yehupenyu yakarongedzwa nemitemo yenyika dzakabudirira.
Saka vakaunza franchises munzvimbo dzose dzekushandisa. Paul naKaiser yezvokubika, Burger King uye KFC nokuda kwezvokudya zvinokurumidza, Lacoste, Hugo Boss, Jennyfer yemafashoni. Vakaziva kuti sezvo mari yavo inowedzera, zvido zvevakatikati vedu kunyaradza zvingakura. Saka vakatanga kugoverwa kwezvokudya zvekumba inotengeswa mumashambaguru ane air-aired. Sezvo vaziva kuti boka iri repakati raida kuva nehanya kwakanaka, vakagadzirira zvipatara zvavo nehurumende-ye-in-art technic platforms.
Sezvakaita hama dzedu dzeLebanese, ngativake bhizimisi redu ibwe nemabwe
Buda munzvimbo yedu yekunyaradza
Tora somuenzaniso basa ravo rakaoma, kutenda kwavo, kutsungirira kwavo uye kunyanya kuda kwavo. Tevedzera maitiro avo ekutungamira zvichienderana nekutaura kwekuti hurumende ine miganhu yayo, inofanirwa kuumbwa uye igare yakasarudzwa. Kufanana nehama dzedu dzeLebanese, ngatizarure mabhizimisi edu mangwanani-ngwanani mangwanani uye tive vekupedzisira kubva. Sezvakaita ivo, ngativake bhizimisi redu ibwe nemabwe. Nemhaka yekuti nenzira iyi iyo nzvimbo inochengetedza Ali Food uye Abou Hardware inoenderana uve Prosuma uye Bernabé.
Usanonoka kusiya nzvimbo yedu yekunyaradza. Kunyange zvazvo vese vekare veAvorian vari kutanga bhizinesi sevadzidzisi vezvemari, chiremba reLebanese hazezeze kuedza kudzorerwa nekona kumwe kubudirira. Dzidziso yedu yepakutanga kana iyo iyo yatakagadzirisa nayo basa redu haifaniri kunge iri nzvimbo dzedu dzekuedza zvekudzidzira zvemabhizimisi.
Iko kuzvizadza muchikoro chebhizimisi ichi kuti tichavaka sangano rega rega rega rega. Iko kunyanya kuburikidza nekufungisisa kwakanaka kunobudirira kuti kuoneka kwatinoshuva zvakanyanya kuda kuzadzika.